Best 15 macruufka 8 Apps in raaxaysta Wonderful macruufka Life
macruufka 8 dambeyntii Isbahysiga soo baxay, oo wuxuu wataa muuqaalada laga cabsado cusub iyo uqaadineed. Hadda, shirkadaha app dhinac saddexaad waxay awoodaan inay ku dhuftay barnaamijyadooda keyboard ay dukaanka Apple App ee macruufka 8 users, iyo dhexgalaan barnaamijyadooda si ay u taabo ID markuu yimaado si ay u maal iyo password. Halkan, waxaan ku wareegsan kor ugu sareeya 15 Chine in ay kuu sheegaan oo keyboard app ugu fiican iyo waxa app hadda ku xidhan yahay taabo ID.
Qaybta 1. Best 7-saddexaad Apps keyboard ee macruufka 8
Qaybta 2. Waa in 8-leeyihiin arrimo Apps la Support ID Touch
Tan iyo Apple oo ku dhawaaqday in macruufka 8 waxaa ilaa barnaamijyadooda keyboard-saddexaad furitaanka, shirkado badan oo la abuuro ama cusboonaysiiso barnaamijyadooda keyboard ah. Waxaan raadin internet-ka oo ay helaan ugu wanaagsan ee Chine 7 keyboard aad u. Hadda, 'fiirino iyaga at.
Keyboard SwiftKey waxaa loo isticmaalaa in app ah keyboard aad u caan ah oo qalab Android. Hadda, waxa yimaado iPhone, iPad ama iPod taabto.
Keyboard SwiftKey kuu ogolaanaysaa inaad nooca aad iPhone, iPad ama iPod xiriiri hab fudud oo degdeg badan. Waxay kuu siinayaa jeedin nooca si sax ah sida ay caado nooca aad. Haddii aad muddo erayada qaldan, keyboard SwiftKey si toos ah iyaga edbin doonaa. Waxa kale oo ay ku siinaysaa awood u leeyahay inuu ku qor in aad hab. Just simbiriirixan ka warqad warqad la socodka SwiftKey. Intaa waxaa dheer, waxay ku siinaysaa laba luqadood. Taasi waxay ka dhigan tahay, in aad ku qor karaa si dabiici ah ka mid launguage in kale.
Baro wax badan oo ku saabsan SwiftKey >>
Sida SwiftKey, Swype sidoo kale waa barnaamijyadooda si weyn loo isticmaalo qalab Android. Haddaba waxaa soo gaaray arrimo 8 qalab. Swype gelineya inaad geli erayada shaashadda si dhakhso ah sidii ay u imput in ka badan 40 eray daqiiqo ah.
Waxaa barto aad ka bixisaa iyo macnaha caqli badan, oo kuu ogolaanaya in aad ku darto erayada si qaamuuska. Marka aad ku qor, waxa ku siinayaa doorashada nooca. Marka aad ku qor erayada qaldan, waxa ay si toos ah u edbin doonaa. Intaa waxaa dheer, waxa aad bixisaa shan mawduucyada keyboard, kuwaas oo Dard, Light, dhulka, Sun iyo Sand. Waxaad mid ka mid ah oo aad u astaysto theme aad keyboard dooran kartaa
Baro wax badan oo ku saabsan Swype >>
Fleksy waxaa regareded sida app ugu dhaqsiyaha badan keyboard in gaaray macruufka 8. Waxay kuu ogolaanaysaa inaad la kulmaan nooc si dhakhso ah oo sax ah, ma u baahan raadinaya. Waxa aad bixisaa in ka badan 800 oo emoticons iyo emoji, si aad u isticmaali kartaa in midabka erayada aad si xor ah. Haddii aad ku qor xarfaha qaldan, Fleksy ogaan doonaa oo la ogaado waxa aad u jeedo oo idin tusin nooca saxda ah. Ka sokow, waxa ay si buuxda u taageersan 40 luqadood, oo kuu ogolaanaya in aad si fudud ku dhex luqadaha beddelaan halka aad qortid.
Baro wax badan oo ku saabsan Fleksy >>
TouchPal waa barnaamijyadooda keyboard talooyin tilmaam / weeraray. Waa awood aad ku qor on-screen dhakhso ah oo si fudud. Oo siisa waayo-aragnimo makiinada ugu fiican, sida aqbasho slide, saadaasha socda hadalka iyo qaababka kale oo badan socodyada. Ka sokow, waxay ku siinaysaa in ka badan 800 oo emojis, si natually aad isku sharaxdo karo.
Baro wax badan oo ku saabsan TouchPal >>
Sida mid ka mid ah barnaamijyadooda keyboard in inoogu iman doonaa, waayo, markii macruufka la sii daayay ka, Adaptxt waa mid aad u dareen leh. Waxaa fahmo stype makiinada oo uu idin wada siiyo saadaasha socda hadalka. Marka aad qortid xarfaha qaldan, Adaptxt ku siinayaa jeedinaya saxayo. Ka sokow, waxa ay taageertaa bedelaan luqadood oo kala duwan, bixinta saadaasha xaaladeed oo ku qoran luqadda SMS iyo Customization keyboard iyo wixii la mid ah.
Baro wax badan oo ku saabsan Adaptxt >>
Keyboard A caadiga ah qaadataa ilaa ku dhowaad nus ka mid ah shaashadda, kuwaas oo mararka qaarkood ma aha saaxiibtinimo. Iyadoo ujeedadu at this, Minuum ayaa sheegtay in ay aad siisaa labada keyboard buuxda oo dhexdhexaad ah oo yar yar, version hoos size-a. Minuum ayaa diyaar u ah iPhone, iPad ama iPod taaban socda macruufka 8. Waxa kaliya eedeeyo $1.99. Waxay kuu ogolaanaysaa soontaan waad iska qor oo aan ka werwerayn oo ku saabsan mistyping, mahad ay smart auto-edbinta u barto ka caado makiinada.
Waxay ka soo dadajiyaa aad makiinada by barashada ka-gaynta aad hadalka, liiska hadalka, luqadda la adeegsado iyo nidaamyada. Ka sokow, waxaad xaq u durki karaa bidix ama in ay tirtirto eray ama ku darto meel. Waxay u egtahay weyn? Waxaad tegi kartaa Apple App Store inaad kala soo baxdo waxa ay Gordhaw Kadhoofaan aad 8 qalabka.
Baro wax badan oo ku saabsan Minuum >>
PopKey ayaa sheegtay in ay barayaa hore dhaceen keyboard adduunka GIF aad u. In ay ururinta, halkaas oo kumanaan tahay ee GIFs oo aad si xor ah u isticmaali kartaa iyadoo la xiriirto dadka kale. Haddii aad la abuuro wax kasta oo GIF aamusnaan ah, ayaa sidoo kale waxa ay aad gali kartaa in ururinta in la shakhsiyeeyo aad keyboard. Ka sokow, waxaa kala GIFs sida ay qaybaha ay, si aad iyaga ka heli kartaa ku haboon. Tani runtii aad doonaa makiinada lagu qoslo, noole. Waxaa ugu dhaqsaha badan soo socda
Baro wax badan oo ku saabsan PopKey >>
macruufka 8 si weyn kor u iPhone, iPad iyo iPod ammaanka taabashada iyo raaxadeeda. Hadda, waxaa laga furay Touch shidma faraha ID in app Company-saddexaad. Hoos waxaa ugu fiican 8 macruufka Chine in ay taageeraan ID Touch.
Hel barnaamijyadooda badan oo ku saabsan iPhone halkan >>
1. Amazon - A Big Platform in ay iibsato wax
2. LastPass - Password A Management App
3. Simple - Sida Bank Onlike ah
4. Maalinta One - Record daqiiqad kasta in Your Life
5. Evernote - A Great Note-qaadashada App
6. Shabaqa VNC - helaan Computer meel kasta
7. Camera Plus - fog laga qabsaday la AirSnap
8. Scanner Pro - Your iPhone / iPad soo celi Sida Scanner ah
Amazon waa goob ah in aad bixisaa tan oo tousands alaabta. Waxaad isticmaali kartaa, raadinta, aragtida info wax soo saarka, akhriska iyo qoraalka commnents iyo iibsadaan waxyaabaha aad doonayay. Just saxiixa iyada aawadeed, oo aad ka iibsan kartaa, u aragto in aad gaadhi, iyo qori comments for aad wax soo saarka.
Hel info badan oo ku saabsan app Amazon ee macruufka 8 >>
LastPass waa tababare password in badbaadiyay sirta oo dhan ayaa daruurtii ka dhex ah, oo waxaad bixisaa fudeydka iyo ammaan iyagii u computer iyo iPhone, iPad iyo iPod taabto. Xasuuso xisaabta LatsPass, oo dhan sirta doonaa in aanay lumin. Waxa aad ku xoojiya sidii ay account LassPass la sugida multifactor hoos u xirtid. Intaa waxaa dheer, waxay kuu ogolaanaysaa inaad qoraalo ka samayso aamin ku kaydiso aad kaararka deynta, xubin & xogta kale oo xasaasi ah.
Hel info badan oo ku saabsan app LastPass ee macruufka 8 >>
Simple waa app bangiga online. Waxay ku siisaa si fudud u helaan macluumaadka bangiyada aad via ID Touch. Marka aad wax iibsato, waxaa idin tusiyo kartaan spendings in ilbiriqsi. By jadwal u spendings aad, aad ku baabbi'iyee karaa sida qumman in ay ka fogaadaan in ka badan-isticmaalka. Haddii aad u baahan tahay qaar ka mid ah caawimaad, waxaad u moobilaakaaga ugu diri kartaa adigoo isticmaalaya app ah, iyo in dhowr saacadood, aad ka jawaabi doonaa.
Hel info badan oo ku saabsan app Simple ee macruufka 8 >>
Maalinta One (Journal / Notes / qorka) waa sida buug xasuusqor oo internetka, taas oo ku diiwaan nolosha oo dhan, ka soo arimo yar yar awgood in dhacdooyinka waaweyn. Maalin maalmaha ka mid ayaa interface ah elegent oo nadiif ah, nolosha qoro farxad. Waxa kale oo ay offes formatting text multi-markdown in midabka duubo. Ka dib markii la duubay, aad u xiri karaan si aad u ilaaliso arimahaaga gaarka ah, iyo waxa lagu furo la ID Touch. Haddii aad jeceshahay, waxaad sidoo kale u isticmaali kartaa DropBox ama iCloud si hagaagsan entries guud ahaan qalabka macruufka oo dhan, ama gurmad oo daabacan.
Baro wax badan oo ku saabsan maalinta One app ee macruufka 8 >>
Sida ay magaceeda soo jeedisay, Evernote waa sahlan in la isticmaalo iyo mid sahlan app note-u samaynta macruufka 8. Sidaa daraadeed, waa fud si aad u hesho qoraalada aad ku iDevice oo dhan aad isticmaasho. Waxaa syncs oo dhan qoraalada iyada oo computer iyo iDevices aad isticmaasho iyo badbaadin daruurta. Intaa waxaa dheer, waxa aad ku xoojiya sidii ay qaadi karto qoraal, sawirro qabsaday, record audio iyo qoraalada video iyo in ka badan. Waxa kale oo aad ka akhrisan kartaa waxa ku jira, mar kasta iyo meel kasta.
Badan oo ku saabsan Evernote Baro macruufka 8 >>
Shabaqa VNC waa la wadaago screen app awood leh oo awood u siiyaa inaad kontoroosho Windows, Mac ama Linux PC safelywhen aadan ka hor waxaa ka mid ah. Ka sokow, la iCloud, aad u hagaagsan karaa screens ku saabsan dhammaan qalab aad macruufka. Waxa kale oo ay ku siinaysaa scrollable tuuryo toolbar screens ", si aad u doonaa had iyo jeer tuuryo aad jeceshahay xiran marka aad u baahan tahay.
Baro qaababka badan oo ku saabsan app Shabaqa VNC ee macruufka 8 >>
Camera Plus waxaad bixisaa qalab weyn oo si photos kaamil ah qaado by waafajin lahaa, oo diiradda iyo halabuurka. Waa awood aad ku laayey sawiro iyo videos dhex hago iyadoo la isticmaalayo AirSnap. Inkasta oo toogasho, ay habaysaa caqligiisu nuurka, si ay u sameeyaan sawiro ama video si cad. Isla mar ahaantaa, waxa ay sidoo kale ku siinaysaa hababka diiradda kala duwan uu ka soo xusho qabtay crips darbo.
Badan oo ku saabsan Camera Plus app Baro macruufka 8 >>
Pro Scanner waa app aad u fiican in si deg deg ah iskaan isticaalka, rasiidhada, qoraalada warqad, iyo wax kasta oo document multipage aad iPhone ama iPad, iyo badbaadin sida PDF files. Baaritaano aad All sidoo kale la uploaded karto si aad WordPress, Evernote, Google Drive ama dadka kale meel kasta oo mar walba ku helaan iyaga. In intaa, marka aad sawiro ku saabsan iPhone, iPad ama qaado, sawirada laga heli doonaa qalab kale macruufka ee seconds.
Badan oo ku saabsan Scanner Pro app Baro macruufka 8 >>
Talooyin aad ka ogaato ka hor inta macruufka 8 Hagaaji
Update macruufka 8 on iPhone / iPad / iPod taabashada
Dhib ku saabsan arrimo 8 Update
Dardar Your iDevice in Orod macruufka 8 Fast
Sida loo kaabta iPad hor macruufka 8 Hagaaji
Sida loo iPod xiriiri kaabta ee macruufka 8 Hagaaji
Sida loo kaabta iPhone hor macruufka 8 Hagaaji
Kabsado SMS on iPhone ka dib markii macruufka 8 Hagaaji
Hoos Your iDevice ka macruufka 8 ilaa macruufka 7
Sida loo dayactir Apple White Screen of Death
1 Click si ay u gudbiyaan Android inay iPhone 6
2 Siyaabaha Bedelka playlist ka Lugood si iPhone
3 Hababka si ay u gudbiyaan Photos ka PC in iPad
3 Siyaabaha kaabta iPad Photos
Top 10 Music Radio Apps ee macruufka iyo Android
Sidee si ay u gudbiyaan Xogta laga macruufka Qalabka Google Nexus
Sidee inuu ka soo kabsado tirtiray Facebook Rasuulka Messages on macruufka
> Resource > macruufka > Best 15 macruufka 8 Apps in raaxaysta Wonderful macruufka Life